Sokola malagasy Ny vahiny indray no mankafy mialoha
Fikirakirana solosaina maimaimpoana Hahazo tombony ireo ankizy 9 ka hatramin’ny 14 taona
Tsy mitovy ny fahaizan’ny tsirairay mikirakira ny teknolojia avo lenta eto amintsika. Ho an’ny eto an-drenivohitra ohatra dia efa zary kilalao izany, indrindra fa ho an’ny ankizy sy ny tanora raha betsaka kosa ireo tsy nahita maso ny fitaovana toy ny solosaina ho an’ireo mponina any ambanivohitra.
Mamiratra hatrany i Shyn Hifaninana amin’ny « Afrima 2018 » any Etazonia
Fifaninanana hatsaran-tarehy tany Toamasina Lasan’i Laura sy Jasmin ny vola 200.000 Ar avy
Nitotorebika i Toamasina ny faran’ny herinandro teo. Sambany mantsy no notontosaina tany an-toerana ilay Star tour hetsika ara-kolontsaina nisantarana ny fotoam-pialantsasatra lehibe amin’ity taona ity.
Hotontosaina ny sabotsy izao tontolo andro etsy amin’ny Carlton Anosy ny varotra fampirantiana momba ny sokola sy ny hatendan-kanina na ilay antsoina hoe « Salon du chocolat et de la gourmandise » andiany faharoa.
Ry zareo avy eo anivon’ny fikambanana mpanao asa sosialy Wednesday morning group na WMG moa no mikarakara ity hetsika ity mba hanohizana ny fanampiana ireo olona sahirana miisa 500 eny Akorondrano Andranomahery hatrany toy ny tamin’ny taon-dasa, raha ny fanazavana. Antony nisafidianana ny toerana dia satria manahirana ny saina ny mieritreritra hoe misy toerana mahafinaritra be eny Akorondrano nefa feno mahantra ao ambadika. Ankoatra ny fitadiavam-bolan’ny fikambanana anefa dia entina hanasongadinana ireo mpandraharaha ara-tsokola eto amintsika ihany koa izy ity satria raha ny lazan’ny sokola malagasy any andafy dia toa ny vahiny indray no mankafy azy, raha ny fanazavana hatrany. Miisa 25 ireo mpandraharaha nanohana ny antso tamin’ity raha 17 tamin’ny taon-dasa. Mitentina 50 tapitrisa ariary kosa no tetibola tratrarina ary maherin’ny 1200 isa ireo mpitsidika andrasana. Manomboka amin’ny 3 sm ka hatramin’ny 1 m ny halavan’ireo sokola ho hita ary aorian’ny fanampiana sahirana eny Ankorondrano moa dia hitady toeran-kafa mitovitovy tranga amin’io indray ny WMG havotany, hoy hatrany izy ireo.